Iibhanki kunye neMali mboleko | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Amabhanki kunye neCredits
Indlela yokufumana mboleko ngaphandle kwama-guarantors kwiimpawu ezifanelekileyo?
Ngaba uyafuna ukuthatha imali mboleko ngendlela efanelekileyo, ungahlawuli ngaphezulu kwenzala, ngaphandle kwesiqinisekiso? Siza kukuxelela ukuba ungayenza njani le nto ukuze waneliseke kangangoko ngokwemigaqo yemali-mboleko! Umntu ngamnye une ...
ukuthini ukuthengiswa kwe-intanethi nokungaxhunyiwe kwi-intanethi kuthetha, ngamakhadi eplastiki, nceda
Ithetha ntoni intengiselwano ekwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi, ngamakhadi eplastiki, nceda umntu eTransa? Ngaba ulele okanye ulele? ktsiya (intengiselwano yebhanki yesiNgesi, evela kwisivumelwano seLat. isivumelwano, isivumelwano) ngokubanzi, nakuphi na ukusebenza ...
I-Sberbank Hayi, awudingi ukubuyisa nantoni na ude wayithatha le mali. Ungalisebenzisa ikhadi njengekhadi lokutsala imali rhoqo (inkcitho-eqokelelweyo). Beka imali yakho apho kwaye uyisebenzise ngaphakathi ...
yintoni umboleko owenziwe ngaphambili
yintoni imali-mboleko esele yamkelwe bububhanxa, eSberbank bafuna kakhulu ngokwamaxwebhu Ngemivuzo, inkqubo elula yokufumana imali-mboleko ebhankini, izatifikethi azifuneki kuba ibhanki sele ibonile ...
ibhanki yaxelelwa ukuba imini iya kuza ngexesha lebhanki, kude kube lixesha elingakanani ixesha lebhanki?
Ibhanki ithe lo mhla uyakufika ngexesha lebhanki, kude kube nini? Umthetho awulichazi igama elithi "usuku lwebhanki" naphina, kodwa ngokwenyani ingqikelelo "yosuku lwebhanki" iyaqondwa ...
apho ibhanki efanelekileyo yaseRussia ibambisana ngayo
Zeziphi iibhanki ezisebenzisana ne-Russian Standard Bank? I-Russian Standard Bank isebenzisana neebhanki ezimbini: i-MDM Bank kunye ne-Master Bank. Ngokwesiseko sesivumelwano esigqityiweyo phakathi kwamaziko emali, abathengi-abaphethe amakhadi ebhanki iRussia ...
Ziziphi iinkampani ezinikezela ukuhlawula imali mboleko kuwe
Zithini iinkampani ezibonelela ngokuhlawula imboleko-mali yeshizi yasimahla iphi? ..Ngokuchanekileyo! http://rbcdaily.ru/finance/562949989025932 Iphiramidi entsha yezemali yavela kwimarike Ngaphambili, abakhohlisi bazama ukufumana imali yabemi, ngoku bakulungele ukufumana ...
Kuthetha ntoni i logo yeSberbank? i-semicircle eluhlaza ngokusika imiqolo
sithetha ntoni isimboli yeSberbank? isemicircle eluhlaza enemigca esikiweyo Icandelo lepiramidi kwisangqa sikaDenyuzhka !!!! Kuyamangalisa, ndizama ukuthumela impendulo okwesithathu, kodwa yena, unezothe, akafuni. Ndiza kuzama okokugqibela. Phezulu ...
Ikhadi lesikweletu Iyintoni inkontileka yekhadi lesikweletu. ngubani othetha oku malunga nalo.
Ikhadi letyala. lithini ikhadi lekhredithi eliluncedo. Ngubani onayo, sixelele ngaye. Ukuthelekisa iibhanki ezahlukeneyo kunzima. Nantsi imilinganiselo yokuthelekisa amakhadi etyala: 1. Inani leentsuku zokhetho ...
Yintoni ekhoyo ibhalansi kunye neengxowa-mali zibhekisela kwikhadi lomvuzo we-VTB 24 ????
Ithetha ukuthini ibhalansi kunye nezemali ezikwikhadi lomvuzo le-VTB 24? Ibhalansi ekhoyo ibandakanya i-overdraft ... I-overdraft yimali mboleko ehlala ikunika yona ... masithi ...
Ukuba uhoxisa imali kwikhadi le-VTB 24 kwi-ATM evela kwi-Sberbank, ingabe uthabatha ikhomishini? Ukuba kunjalo, kungakanani?
Ukuba uthatha imali kwi-VTB 24 khadi kwi-ATM evela eSberbank, bayayithatha ikhomishini? Ukuba kunjalo, kangakanani? jonga ibhalansi yephepha lebhanki leposi ukuba ingaba ikhomishini izakuba yimalini kwi-vtb Uninzi luthathe irhoxise ezimbini ...
isiqinisekiso sokubolekisa imali ngubani na lo msebenzi? Nemisebenzi yakhe
Ngubani lo uqinisekisa ngemali mboleko kunye noxanduva. Kwaye uxanduva lwakhe. Ngubani qiniseka? Iyintoni indima yayo ekubolekiseni ngemali? Kwaye kutheni iibhanki zikulungele ukukhupha iimali mboleko zabathengi, kunye nezinye iimali mboleko, ...
Ukhohlwe iphasiwedi ukusuka ekhadini lomvuzo vtb 24.
Ndilibele iphasiwedi ye-VTB 24 yemivuzo. Kuya kufuneka unxibelelane nebhanki malunga nokukhutshwa kwakhona kwekhadi. Ibhanki ayazi ikhowudi yePIN. Nditsalela ingqalelo yakho kwinto yokuba ibhanki iyakuhlawulisa ikhomishini ngokwe ...
Amakhadi asebhange asebenza njani?
Asebenza njani amakhadi ebhanki e-chip? Amakhadi e-Chip aveliswa kusetyenziswa ubuchwephesha obufanayo, kodwa endaweni yetape yamagnetic enolwazi, i-chip ekhethekileyo ibethelelwe emakhadini. I-chip enjalo iyikhompyuter encinci. Amakhadi…
Uphi ulwazi lolawulo kwikhadi lebhanki i-Sberbank Visa electron ???
Luphi ulwazi lolawulo kwikhadi lebhanki le-Sberbank Visa electron ??? Ulwazi lolawulo lukwisicelo sekhadi, kwaye kukwakho nolwazi lolawulo lwedijithali- kufuneka lufumaneke kulwazi lolawulo ...
malunga nekhadi laseSberbank elidlulileyo
malunga nekhadi leSberbank eliphelelwe lixesha Nxibelelana nesebe apho wavula khona ikhadi, ukuba liphelelwe lixesha, kunokwenzeka ukuba kukho ikhadi elitsha kwisebe kwaye likulindile (amakhadi ekupheleni kwekota ...
Zingaphi iidola ziza kuba ne-100 kwi-ruble ??? Ndandifumana iidola ezilikhulu, okwenene!
Yimalini nge-100 zeerandi kwiiruble ??? Ndifumene nje ikhulu leedola, ngenene! I-2,700 mhlawumbi kancinane ngaphezulu Emva koko umntu osondeza umzimba okufutshane! malunga ne-3 yeeruble, ndicinga njalo malunga ne-000 ...
Ngaba kunokwenzeka ukuhoxisa imali kwikhadi, ukwazi kuphela inombolo yayo?
Ngaba kunokwenzeka ukurhoxisa imali ekhadini, usazi kuphela inani lalo? Ewe, akukho ndlela yokuhambisa imali ngenombolo yekhadi evela phesheya. Akukho mntu uya kukhupha imali, kuhlala kufunwa iphasiwedi, ekufuneka ...
Ukugqithiselwa kwi-Bank yaseMoscow ukuya eSberbank
Ukutshintshwa ususwe kwibhanki yaseMoscow uye eSberbank 2 LENA uye kumqeshwa woMbutho (into efana nabasebenzi abakhonza iiSberlokhs akufuneki babenobukrelekrele kuneSberlokh. Bonke baphume kwidesika enye (enkulu) yeBhanki yaseMOSCOW: 1. NONE
Ndifuna ukuthatha ifowuni kwiimfakelo
Ndifuna ukuthatha ifowuni UKUFAKWA Ukuthatha imali mboleko, kuya kufuneka usebenze kwenye indawo ngokusesikweni, hayi inyanga enye, kodwa ube namava athile (ibhanki nganye ineemfuno zayo zamava). Ukuba akukho ndawo ngokusemthethweni ...
Imibuzo ye-68 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,163.